Vaovao - inona ilay harato hexagonal wire
Hexagonal wire mesh dia iray amin'ny harato tariby misy lavaka hexagonal. Ity karazana tariby hexagonal harato ity dia tenona amin'ny tariby vy, tariby vy ambany karbaona na tariby vy tsy misy fangarony. ary mifono pvc. raha misafidy mafana atsoboka vita amin'ny rivotra ianao dia misy fomba roa: ny iray dia alentika mafana alohan'ny fanenomana, ny iray kosa asiana savony mafana aorian'ny fanenomana.
Ny fiarovana ny PVC dia hampitombo be ny fiainana misy ny harato tariby. Ary amin'ny alàlan'ny safidy amin'ny loko samihafa dia azo ampifandraisina amin'ny tontolon'ny natiora manodidina izy io.
Ny harato hexagonal wire dia afaka mizara ho malefaka hexagonal wire haresh ary wire hexagonal wire mesh. Harato hexagonal light dia fantatra ihany koa amin'ny tranon'ny akoho, harato hexagonal mavesatra fantatra ihany koa amin'ny harato vato cage.
Noho izany, nandrisika tariby hexagonal harato mampiasa savaivony tariby 0.3mm ka 2.0mm; pvc mifono plastika hexagonal harato mampiasa savaivony tariby ho an'ny 0.8mm to2.6mm tariby vy pvc. hatao amina lafiny iray sy roa tonta.
Izy io dia matetika ampiasaina amin'ny indostrialy, fananganana ary fambolena, izy io koa dia be mpampiasa toy ny fefy. Toy ny tranom-borona, fiarovana ny biby. Raha te hampiasa harato hexagonal harato ianao ho haingo ny Noely dia safidy tsara izany. Na izany na tsy izany dia afaka misafidy ianao ny zavatra takinao.
2.Faherezana mahery vaika hanoherana ny fahasimban'ny fahasimban'ny natiora sy ny fanoherana ny vokadratsin'ny toetr'andro.
3.Can mahatohitra deformation isan-karazany, fa mbola tsy hirodana.
4.Excellent dingana fototra miantoka ny fitoviana ny coating matevina sy ny hamafin'ny fanoherana mafy.
5. Mitsitsia vola amin'ny vidin'ny fitaterana, azo zahana anaty horonana kely ary fonosina amin'ny taratasy tsy misy hamandoana, makà toerana kely.
6.Mesh lavaka tsara sy mahazatra .Mesh fanokafana dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
1.Miorina miorina amin'ny rindrina, insulation heat
2. Fiarovana amin'ny fonenana, fiarovana ny ala
3. Fiarovana ny vorona
4. Miaro sy manohana ny ranomasina, sisin'ny havoana, lalana ary tetezana.